Kenya oo gubtay alaab lagu qiimeeyay 44-kun kana timid Soomaaliya
Maceeshadan dabka la qabadsiiyey ayay mas'uuliyiintu sheegeen in laga qabtay sohdinta labadda waddan.
NAIROBI, Kenya – Mas'uuliyiinta ismaamulka Wajeer ee Kenya ayaa Khamiistii dab-qabad siiyey maceeshad lagu qiimeeyay ku dhowaad 44-kun oo Doollar-ka Mareykanka taasoo ka timid dhanka Soomaaliya.
Saraakiisha ayaa tibaaxay in alaabta la gubay, oo isugu jirtay Caano, Sonkor iyo Cunnooyin kale, ay ka qabteen xadka laba waddan.
Taliska Booliska ayaa ku tilmaamay badeecaddan mid qaab aan sharciga waafaqsaneyn lagu geliyay dalkan dhaca barigga qaaradda Afrika.
Wargeyska afka dheer ee kasoo baxa Nairobi, Daily Nation, ayaa ku waramaya in maxkamad ay amar ku bixisay in la burburiyo raashiinka.
Cumar Beja, taliyaha bileyska Wajeer, ayaa ku dhawaaqay in waqti xaadirkaan sohdinta Soomaaliya-Kenya ay ka xiran tahay ganacsiga.
Bilooyin kahor ayay ahayd markii isla gobolkaan lagu gubay maceeshad lagu qiimeeyay ku dhowaad 48-kun oo Doollar-ka Mareykanka ah, taas oo ka timid dhinaca Soomaaliya laguna qeexay mid sharci darro ah.
Maamulka ayaa wuxuu ku goodiyey in ay kordhin doonan howlgaladda ka dhanka ah "raashiinka sida sharci daradda lagu soo gelinayo gobolka".
Soomaaliya iyo Kenya, oo haatan ay ka dhaxeyso dacwad dhanka xuduud badeedka ah, ayaa waxay wadaagaan xuduud lagu sheegay 500 KM.
Kiiskaan oo mad-madow u yeelay cilaaqaadka labadda dowladood ayaa saameeyay; ganacsiga, siyaasadda, diblumaasiyadda iyo is-dhexgalka gaar ahaan dhanka xuduudka oo la adkeeyay.
Maxkamadda Cadaaladda Aduunka ee ICJ, taas oo gal-maqalka uu horyaalo, ayaa muddeysay in bisha June ee 2020-ka ay dib u bilaabi doonto dhageysiga kiiskan oo taagan tan iyo bishii August 2014.
Dacwadda u dhaxeysa labadda waddan ee deriska ah ayaa waxay ku saabsan tahay goob ku taala xuduudka, halkaas oo hodan ku ah noocyo kamid ah kheyraadka dabiiciga ah sida; Gaaska naqaska ah iyo shidaalka.
Askar lagu laayey qarax xoogan oo ka dhacay gudaha Kenya
Afrika 28.12.2019. 07:02
Isla goobta uu weerarkan ka dhacay ayaa horaantii sanadkan lagu beegsaday ciidamo kale.
Kenya oo sheegtay in ay dishay afar lagu tuhunsan yahay Al-Shabaab
Afrika 13.04.2020. 20:00
Weerar askar looga dilay Kenya oo ka dhacay sohdinta Soomaaliya
Afrika 15.06.2019. 13:55
Afar qof oo ka tagtay Soomaaliya oo loo karantiilay Coronavirus
Afrika 29.04.2020. 12:15
Afrika 06.12.2019. 20:43